कोरोना अस्पतालको अनुगमनका लागि समिति गठन – Kanika Khabar
Kanika Khabar १० जेष्ठ २०७८, सोमबार ०७:४१ May 24, 2021 मा प्रकाशित
कोभिड–१९ का बिरामीहरु राखिएका निजी तथा सरकारी अस्पताललाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि सरकारले समिति बनाएर अनुगमन सुरु गरेको छ । कोरोनाका बिरामी राखिएका अस्पतालमा अनुगमन गरेपछि अस्पतालहरुको उपचार पद्धती थप व्यवस्थित भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दाबी छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट दुई वटा समूहले सङ्क्रमितको बेड, प्रेस्क्रिप्सन, अक्सिजन लगाएतका बषियमा स्थलगत अनुगमन गरिरहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीले सीआईएनलाइ जानकारी दिनुभयो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाइएको छ ।